Fotoana famakiana: 8 minitra Na dia mitsidika Amsterdam voalohany na niverina mba hijery ny tsara tarehy indray lakandrano, te hahafantatra momba ireo zavatra tsy manam-paharoa hatao any Amsterdam ianao! Raha vonona hikaroka traikefa an-dafin'i Damrak avenue any Amsterdam ianao, lisitra ity…
Fotoana famakiana: 4 minitra Traveling ny mahita ny hitan'ny lehibe safidy - Ahoana anefa raha ianao ihany no te-miala voly? Raha izany, misy tanàna tsara indrindra Nightlife, ary mahazo any lamasinina dia mora sy lafo. Fa ny antoko biby, tsy misy na inona na inona…
Fotoana famakiana: 5 minitra Fankalazana ny Andron'ny Mpanjaka any Holandy mety ho ny tsara indrindra ao amin'ny antoko Holland. On 27 Aprily, dia mankalaza Mpanjaka Willem-Alexander ny andro nahaterahan'i amin'ny mozika, eny an-dalana antoko, parasy tsena, ary mahafinaritra entanao. Ny mpanjaka ny tenany mandeha amin'ny firenena ny fianakaviany. Ny alina talohan'io…